အဆိုပါ Cologne ပွဲတော်ကျိန်းသေသင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းဖြည့်စွက်ရကျိုးနပ်သည်. 1.5 နှစ်စဉ်နီးပါးတက်ရောက်သူသန်းချီ, သဘောတူ! ထို့အပြင်ပဉ္စမ-ရာသီအဖြစ်လူသိများ, ဒီကမ္ဘာကျော် ပွဲတော် တစ်ဦးဖြစ်ဖို့သေချာသည် တစ်သက်တာ၏အတွေ့အကြုံကို. အဆိုပါ Cologne ပွဲတော်သာပျော်စရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်လည်း စူပါလွယ်ကူပါတယ် ရထားရ, အကူအညီဖြင့်ကယ်ရထားမွာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပေးချက်များ အဆိုပါ Cologne ပွဲတော်ဘို့ 2019 နှင့်မည်သို့ရထားအဲဒီမှာရဖို့.
ဒါဟာဝတ်စုံသွားကြဖို့အချိန် စျေးဝယ်. အဘယ်သူစားဆင်ယင်တက်မချစ်ပါဘူး? အဆိုပါစတိုင်ဘရာဇီးကျင်းပတဲ့ပွဲတွေကနေမဟုတ်ဘဲကွဲပြားခြားနားသည်. မိတ်ကပ်နှင့်အ sequins တစ်မိုးသည်းထန်စွာထိုးပိုမို "Prussian Soldier" စဉ်းစားပါ!
ဘောလုံးနှင့်အခြားမိုးလုံလေလုံဖြစ်ရပ်များအတွက်, ပါးလွှာသောဝတ်စုံအကြံပြုကြသည်. သင်အမှန်တကယ်လိုလျှင် အတှေ့အကွုံ ဒီပွဲတော်, ပြီးနောက်သင်အပြင်ဘက်သွားကြဖို့လိုအပ်! ရုံအောက်မှာပူနွေးတစ်ခုခုဝတ်ဆင်ဖို့သတိရပါ! The real Cologne carnival fan is not put off by the ရာသီဥတု! ပြီးခဲ့သည့်တစ်မိနစ်မှာရောက်လာသူကိုဧည့်သည်များမျက်နှာဖုံးများကိုတွေ့လိမ့်မည်, ဝတ်စုံ, နှင့်လုပ်-Up အများအပြားစတိုးဆိုင်များအတွင်းရှိမြို့လယ်မှာရှိတဲ့. နောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်, ရိုးရှင်းတဲ့အနီရောင်စက္ကူနှာခေါင်းကိုသင်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည်. ယူဦးမလား စားဆင်ယင်အချက်အလက်.
ဤသည်မှာစကားလုံးအရက်ဆိုင်ကိုရည်ညွှန်းသည်, အရက်ဆိုင်သို့မဟုတ် စားသောက်ဆိုင်. အားလုံးနီးပါးကသူတို့ကို၏, Cologne ပွဲတော်ကြီးကျင်းပနေအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ. သူတို့ကတတန်းအတွက်အခမ်းအနား၏ခြောက်ရက်ပတ်လုံးများအတွက်ကြီးမားသောအကအခုန်အထပ်ဖန်တီးရောင်စုံအရာအားလုံးအလှဆင်ဖို့ပရိဘောဂထုတ်ရှင်းလင်း. အများအပြားသည်ဒေသခံအရက်ဆိုင်များတွင်, သာKölsch ဂီတ ကစားနေသည် (အဆိုပါKölschစကားသီချင်းဆို). သငျသညျမကြာခဏများ၏ရှေ့မှောက်၌ 300 မီတာရှည်လျားစီတန်းမှတက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ရိုးရာအရက်ဆိုင်.
တွင် 1824 Beuel အတွက်, Bonn ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, အဝတ်လျှော်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Karneval ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်. ဒါဟာတခြားလူတိုင်း Karneval ကျင်းပနေစဉ်သူတို့ရေချိုးခန်းလုပ်နေတာငြီးငွေ့ခဲ့ကြပုံရသည်. သူတို့ဟာ Town Hall ဝင်စီးပြီးနှင့်မြို့အစိုးရလွှဲပြောင်းယူ. (အခုတော့သတိရ ... Karneval အစိုးရအရာရှိများပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး caricatured ကြသောအခါအချိန်ဖြစ်ပါသည်, ကာလှောင်ပြောင်အစိုးရရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့တွင်, အမြိုးသမီးမြားဖွငျ့ဤ "ကို Beuel Town Hall ၏မုန်တိုင်း" ရုပ်မြင်သံကြားတိုက်ရိုက်ပြသ. မိန်းကလေးတစ်ဦးကို Power!
Kölschအတူပွဲတော်ကြီးမနက်လည်စာပြီးနောက် ဘီယာ, အဆိုပါ Neumarkt မှာစစ်တပ်အစဉ်အလာနှင့်အတူပွဲတော်ကြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ bivouac မှာစွမ်းဆောင်ရည်လည်းမရှိ. In the evening you can go to the Ghost Parade.
နံနက်ယံတွင်, ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကိုသွား လက်ခံရရှိရန်တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပြာပေါ်သူတို့ရဲ့ foreheads၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်ဆန့်ကျင်ဘက်. ထိုညနေတွင်, ယခုနှစ်ရဲ့ပွဲတော်ကြီးရာသီအစဉ်အလာငါးညစာမှာကောက်ချက်ချနေသည်.
Have we convinced you to attend Cologne Festival 2019, သေး? သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေဖမ်းပြီးကနေ Sava တစ်ဦးကရထား in minutes with no extra, ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အဖိုးအခ! Which means more money for Weetschaff 🍻
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cologne-festival/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)